Faly ny vahoaka amin'ny fandravana ny Hotely Trump sy ny Casino ao amin'ny Atlantic City
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Faly ny vahoaka amin'ny fandravana ny Hotely Trump sy ny Casino ao amin'ny Atlantic City
Afaka nandoa $ 10 ny mpijery hijerena ny fandravana, na dia nanome be aza ny hafa. Ny sasany nandoa dolara an-jatony mba hahazoany seza eo anoloana eo amin'ny trano misy fijery mivantana ny implosion
Trump Hotel and Casino teo aloha dia nesorina tamin'ny fandravana voafehy
Trump Plaza Hotel sy Casino dia nanjary simba hatramin'ny nanakatonana ny taona 2014
Ilay hotely dia nampiantrano olo-malaza lehibe toa an'i Jack Nicholson, Warren Beatty, Mick Jagger, ary ny maro hafa
Ireo mpijery vahoaka, izay nandoa vola tokoa hijerena ny fandravana ny fananan'i Donald Trump teo aloha tao amin'ny Atlantic City Boardwalk any New Jersey, dia nihoby rehefa nahazo ny sandan'izy ireo satria potika tamin'ny fandravana voafehy ny alarobia maraina ny tranon'ny Trump Plaza Hotel sy ny Casino.
Na dia teo aza ny Trump Plaza Hotel sy ny Casino dia iray amin'ireo manintona lehibe teo amin'ny Boardwalk, dia simba tanteraka izany hatramin'ny nanakatonana ny taona 2014, miaraka amin'ireo potipoti-javatra manomboka ny hikororosy sy hianjera amin'ilay trano.
Raha ny filazan'ny mpitantana ny hetsika teo aloha teo amin'ny casino, Bernie Dillon, tamin'ny androny dia nampiantrano olona malaza toa an'i Jack Nicholson, Warren Beatty, Mick Jagger, ary ny maro hafa ny hotely.
Na dia teo an-trano aza ny anaran'i Trump dia nifindra tamin'ny orinasa izy tamin'ny 2009.
Amin'ny horonantsary midina amin'ilay trano, re ny vahoaka mihoby.
Afaka nandoa $ 10 ny mpijery hijerena ny fandravana, na dia nanome be aza ny hafa. Ny sasany nandoa dolara an-jatony mba hahazoany seza eo anoloana eo amin'ny trano misy fijery mivantana ny implosion.
Nisy aza ny lavanty natao teo aloha izay mety hanome ny olona fotoana iray hanindry ny bokotra izay nanapoaka ny fipoahana, niaraka tamin'ny vola mankany amin'ny asa soa. Nofoanana anefa izany taorian'ny fanoherana nataon'ny tompona trano.
Voalaza fa 175,000 dolara ny tolotra voalohany.
Suède: mety hilaina ny manidy ny ampahany amin'ny fiarahamonina